सुगर तथा हाडजोर्नीको दु-खाईका लागि अमृत समान हुन्छ यो फूल, जानिराखे राम्रो ! – Sapana Sanjal
June 24, 2021 136
Sapana Sanjal : सुगर तथा हाडजोर्नीको दु-खाईका लागि अमृत समान हुन्छ यो फूल, जानिराखे राम्रो ! हाम्रो वरिपरिका वनस्पतिबाट हाम्रा पूर्वजहरुले औषधि बनाउँथे र तिनै वनस्पतिको प्रयोगले नै निको पनि हुन्थे । ती वनस्पतिहरुले कुनै नकारात्मक असर पनि नगर्ने हुनाले मानिसहरु स्वस्थ रहन्थे र उनीहरुको आ-यू पनि लामो हुने गर्थ्यो ।
त्यसै एक किसिमकाे फूलकाे नामा हाे कनेर फूल जुन हिमाली क्षेत्रमा अर्थात चिसो ठाउँमा पाइन्छ । यो फूल सेतो, रातो, पहेंलो लगायत रंगमा हुन्छ । यो फूल विशेष गुणहरुले भरिपूर्ण फूल हो । यो फूल यति कडा हुन्छ कि, यसको वरिपरि सर्प आउँदैन । सर्प, वि-च्छी आदि वि-षालु कि-राले टो-केको ठाउँमा यो फूल लगाउनाले निको पार्छ ।
जसका लागि फूललाई मिचेर त्यसको सेतो पदार्थ निकाल्नुपर्छ र कि-राले टो-केको संगै यस फूलको रसले का-टेको, पोलेको लगायत अन्य घा-उलाई पनि निको पार्छ । यो फूल हरेक जसो बिमारको लागि औषधि मानिन्छ । करेन फूल मधुमेह जस्तो रोगको लागि पनि औषधि हो । यो फूललाई लेप बनाएर जोर्नीमा लगाउनाले जोर्नी दुख्ने समस्या कम हुँदै जान्छ ।
मधुमेह रोग भएका व्यक्तिले यो फूलको रस पिउनाले मधुमेह कन्ट्रोलमा आउन थाल्छ, साथै यसले छाती समबन्धि समस्या पनि कम गरिदिन्छ । यो रसलाई लगाउने या त फूललाई थिचेर पेस्ट बनाएर अनुहारमा लगाउने गर्नाले अनुहारको जस्तोसुकै दाग पनि हट्छ र अनुहार सफा तथा चम्किलो हुन्छ ।
अनुहारको साथै कपालको लागि पनि यो फूल औषधि सावित हुन्छ । यो फूललाई केरा र तिल संग मिलाएर लगाउनाले कपाल झर्ने समस्या हट्दै जान्छ । यसको रस कपालमा लगाउनाले कपाल फुल्ने क्रम पनि कम हुँदै जान्छ ।
Nextअब ६० वर्ष पुगेका एकल महिला पुरुष दुबैले मासिक भत्ता पाउने